14Pcs ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောသံမဏိ Straw များကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းဝယ်ပါ WoopShop®
အရောင် 04 သက်တံ့ 5pcs 04 ငွေ 5pcs 03 ရောနှော 8pcs 03 သက်တံ့ 8pcs 05 သက်တံ့ 7pcs 05 ငွေ 7pcs 04 ရောနှော 5pcs 01 ရောနှော 4pcs 01 သက်တံ့ 4pcs 01 ငွေ 4pcs 03 ငွေ 8pcs 02 ရောနှော 8pcs 02 သက်တံ့ 8pcs 02 ငွေ 8pcs 05 ရောနှော 7pcs 06 ငွေ 9pcs 06 သက်တံ့ 9pcs 06 ရောနှော 9pcs 06 နှင်းဆီရွှေ 9pcs 06 ခရမ်းရောင် 9pcs 06 အပြာရောင် 9pcs
04 သက်တံ့ 5pcs 04 ငွေ 5pcs 03 ရောနှော 8pcs 03 သက်တံ့ 8pcs 05 သက်တံ့ 7pcs 05 ငွေ 7pcs 04 ရောနှော 5pcs 01 ရောနှော 4pcs 01 သက်တံ့ 4pcs 01 ငွေ 4pcs 03 ငွေ 8pcs 02 ရောနှော 8pcs 02 သက်တံ့ 8pcs 02 ငွေ 8pcs 05 ရောနှော 7pcs 06 ငွေ 9pcs 06 သက်တံ့ 9pcs 06 ရောနှော 9pcs 06 နှင်းဆီရွှေ 9pcs 06 ခရမ်းရောင် 9pcs 06 အပြာရောင် 9pcs
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောသံမဏိကိုယ်ထည်များ - 14 သက်တန့် 04pcs backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဘားဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: သောက်စရာ Straw
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: FDA, EEC, LFGB, CIQ, CE / EU, SGS
အရောင်: ငွေ၊ သက်တံ၊ ခရမ်းရောင်၊ အပြာ၊ နှင်းဆီ၊ အနက်ရောင်
အသွင်အပြင် - ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောသတ္တုသရွတ်၊ သံမဏိကောက်ရိုး
လျှောက်လွှာ: မူလစာမျက်နှာပါတီပါတီ Tools များ
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ: သံမဏိ Straw Brush
Straw ပုံစံ: ကွေးခြင်းနှင့်ဖြောင့်ခြင်း
အရေအတွက် - Straw + Brush + Bag
အားသာချက် - သံမဏိပစ္စည်း ၃၀၄ ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆိပ်မရှိသောနှင့်အရသာမရှိသော၊ ချေးခြင်း၊ သံချေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။ ဤစတိုင်သည်သံမဏိ ၃၀၄ မှပြုလုပ်ထားသည်။ ရရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံးတန်းဖြစ်သော 304 သည်တောက်ပ။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
တကယ့်ကိုအေးမြတဲ့ပိုက်တွေပါပဲ။ အများဆုံးအကောင်းဆုံးကိရိယာအစုံနှင့်အိတ်။ Volgograd-1.5 မှပေးပို့ခြင်း
шлооченьдолго။ нотовароченьклассный !!!!
Хорошиетрубочки! пластиковыхотказаласьот зубы)))))))
Siparişimyaklaşık3haftada elime ulaştı။ Yakın zamanda toptan siparişvereceğim။ Ürünlertamamıylaanlatıldığı gibi ve зokgüzeller။ Satıcıyaзokteюekkür ederim ။ အင်္ဂလိပ်အတွက် - ကျွန်ုပ်အမှာစာသည် ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ ငါမကြာမီလက်ကားရောင်းမှာပါလိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်များဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွန်လှပသည်။ woopshop အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်